Amathuba we-PR e-inthanethi nemiphumela | Martech Zone
Amathuba we-PR PR eku-inthanethi nemiphumela
NgoLwesine, Februwari 9, 2012 NgoMsombuluko, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
60% yamaMelika izokwahlulela inkampani yakho ngokuya ngobukhona bakho online. Cabanga ngalokho isikhashana. Yize iwebhusayithi yakho ibamba iqhaza elibalulekile ebukhoneni bakho be-inthanethi, kunokunye. Abantu bafuna umkhiqizo wakho futhi bahlulele inkampani yakho ngokuya ngalokho okuvelayo ezinjini zokusesha.
Ukutshala imali ku-inthanethi ye-PR kuyakusiza phatha ukuba khona kwakho ku-inthanethi
Engikuthandayo ngale infographic kakhulu ukuthi kunikeza okufakwayo kokuthi ungakanani umsindo okhona nokuthi abathengi bangakwazi kanjani ukumelana nawo. Njengoba ibhizinisi nezinkampani zifuna umkhiqizo wakho, ku-inthanethi Amasu we-PR ingakusiza utholakale okuningi ngempumelelo enkulu. Siyathanda ukusebenza nenkampani yethu ye-PR, i-Dittoe PR… bayakwazi ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu atholakala ezindaweni lapho izithameli zabo ezibhekiswe kuzo zisebenza khona kakhulu.
I-infographic evela ku-PRMarketing.com.
Tags: pr onlineubudlelwano bomphakathi onlinepr infographicamathubaimiphumela ye-prukumaketha
Ukuqhuma Kokumaketha Okuqukethwe